Ciidamada Somaliland iyo malayshiyadii la socotay oo ka baxay degmada Taleex • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Ciidamada Somaliland iyo malayshiyadii la socotay oo ka baxay degmada Taleex
Ciidamada Somaliland iyo malayshiyadii la socotay oo ka baxay degmada Taleex
April 16, 2014 - By: Abdirizak Shiino
Ciidamada maamulka Soomaaliland iyo malayshiyo taageersanayd oo shalay qabsaday magaalada Taleex ee gobolka Sool ayaa maanta isaga baxay halkaas, kadib saacado badan oo ay degmada haysteen.
Cutubyo ka tirsan ciidamada hubaysan ee Soomaaliland oo xalay ilaa saaka isku balaadhiyey qaybaha degmada iyo deeganada ku dhow dhow ayaa si deg deg ah uga baxay Taleex, goor duhurnimadii maantay ah.
Cismaan Xirsi oo ah goob jooge degmada Jooga ayaa Horseed media u sheegay in ciidamadu magaalada ka bexeen oo ay u dhaqdhaaqeen dhanka magaalada Laascaanood ee xaruunta gobolka Sool.
Ilaa hadda lama oga sababta ka dambaysay bixintaanka ciidamada Soomaaliland, waxayse maanta la shireen odoyaasha degmada, sidoo kale waxaa saaka ku banaan-baxay shacabka magaalada Taleex oo diidmo ka muujiyey joogitaanka Soomaaliland. Wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamada Somaliland cabsi dagaal uga baxeen magaalada oo aysan ka fogeyn halka ay degeen si ay isaga caabiyaan weerar uga yimaada jiho kasta.
War-saxaafadeed uu weriyaasha u akhriyey wasiirka warfaafinta Puntland maalintii shalay (Talaada), wuxuu ku sheegay in maamulkiisu ay talaabo macquul ah ka qaadi doonaan daan-daansiga Soomaaliland ay ka wado dhulka Puntland.
IGAD, midowga Afrika iyo beesha caalamka ayaa Puntland ogaysiiyey in ay talaabooyin la mid ah tan Soomaaliland ay qaadi doonto, isla markaasna aysan muujin doonin dulqaad intaas ka badan iyo dhowristii derisnimo ee hore.